Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » isikhululo » Ubuso bakho siSazisi sakho esitsha sokuHamba: I-Biometrics ilungile!
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Technology • Tourism
Ngovavanyo olongezelelweyo lwamaxwebhu e-COVID-19, ixesha lokuqhuba kwizikhululo zeenqwelomoya lithatha ixesha elide. Ngaphambi kwe-COVID-19, abakhweli abaqhelekileyo bachithe iiyure eziyi-1.5 kwiinkqubo zokuhamba (ukungena, ukhuseleko, ulawulo lomda, izithethe, kunye nebango lempahla). Idatha yangoku ibonisa ukuba amaxesha okusetyenzwa kwesikhululo seenqwelomoya aye ebhaluni ukuya kwiiyure ezi-3 ngexesha lexesha eliphakamileyo kunye nomthamo wokuhamba malunga nama-30% kuphela amanqanaba aphambi kwe-COVID-19.
I-International Air Transport Association (IATA) ibhengeze iziphumo ze-2021 Global Passenger Survey (GPS), eyanikezela ngezigqibo ezibini eziphambili:
Abakhweli bafuna ukusebenzisa ukuchongwa kwebhayometriki ukuba ikhawulezisa iinkqubo zokuhamba.
Abakhweli bafuna ukuchitha ixesha elincinci besemgceni.
“Abakhweli bathethile kwaye bafuna iteknoloji isebenze nzima, ngoko ke bachitha ixesha elincinci 'belungiswa' okanye beme emigceni. Kwaye bazimisele ukusebenzisa idatha yebhayometriki ukuba inika esi siphumo. Phambi kokunyuka kwetrafikhi, sinethuba lokuqinisekisa ukubuya okugudileyo kuhambo emva kobhubhani kwaye sihambise uphuculo lwexesha elide kubakhweli, iinqwelomoya, izikhululo zeenqwelo moya kunye noorhulumente, utshilo uNick Careen, uSekela Mongameli oPhezulu we-IATA kwiMisebenzi. Ukhuseleko, kunye noKhuseleko.
I-73% yabakhweli bazimisele ukwabelana ngedatha yabo ye-biometric ukuphucula iinkqubo zesikhululo seenqwelomoya (ukusuka kwi-46% ngo-2019).
I-88% iya kwabelana ngolwazi lokufudukela kwamanye amazwe ngaphambi kokuhamba ukuze kuqhutywe ngokukhawuleza.
Ngaphezulu nje kwesithathu sabakhweli (36%) baye banamava okusetyenziswa kwedatha yebhayometriki xa behamba. Kwaba, i-86% yanelisekile ngamava.
Ukukhuselwa kwedatha kuhlala kungumba ophambili kunye ne-56% ebonisa inkxalabo malunga nokuphulwa kwedatha. Kwaye abagibeli bafuna ukucaca malunga nokuba ngubani idatha yabo ekwabelwana ngayo (52%) kunye nendlela esetyenziswa ngayo / iqhutywe ngayo (51%).
I-55% yabakhweli ichonge ukukroba njengendawo ephezulu ekufuneka iphuculwe.
I-41% yabakhweli bachonge ukukroba kwindawo yokuhlola ukhuseleko njengomba ophambili wokuphucula.
I-38% yabakhweli ichonge ixesha lokufola kulawulo lwemida / lokufudukela kwelinye ilizwe njengendawo ephezulu yokuphuculwa.
Ukunyuka okukhulu kokulinda kukungena kunye nokulawula umda (ukufuduka kunye nokufuduka) apho iziqinisekiso zempilo yokuhamba zijongwa ikakhulu njengamaxwebhu amaphepha.
Oku kudlula ixesha abakhweli abafuna ukulichitha kwiinkqubo kwisikhululo seenqwelomoya. Uphando lufumanise ukuba:
I-85% yabakhweli bafuna ukuchitha ngaphantsi kwemizuzu engama-45 kwiinkqubo kwisikhululo seenqwelomoya ukuba bahamba nemithwalo yesandla kuphela.
I-90% yabakhweli bafuna ukuchitha ngaphantsi kweyure enye kwiinkqubo kwisikhululo seenqwelomoya xa behamba ngebhegi etshekiweyo.
I-IATA, isebenzisana nabachaphazelekayo kushishino, ineenkqubo ezimbini ezivuthiweyo ezinokuxhasa ukunyuswa ngempumelelo kwenqwelomoya emva kobhubhani kwaye inike abahambi amava akhawulezileyo abawafunayo.
Ukuhamba kwe-IATA sisisombululo sokulawula intaphane yeziqinisekiso zezempilo zokuhamba ezifunwa ngurhulumente. I-app ibonelela ngendlela ekhuselekileyo nekhuselekileyo yokuba abahambi bajonge iimfuno zohambo lwabo, bafumane iziphumo zovavanyo kwaye baskene izatifikethi zabo zokugonya, baqinisekise ukuba ezi ziyahlangabezana neemfuno zokuya kunye nezohambo kwaye babelane ngezi ngaphandle kwamandla namagosa ezempilo kunye neenqwelomoya ngaphambi kokuhamba nokusebenzisa. i-e-gates. Oku kuya kunciphisa ukufola nokuxinana ekuhlolweni kwamaxwebhu—ukuze kuxhamle abahambi, iinqwelo-moya, izikhululo zeenqwelo-moya noorhulumente.
Isazisi esinye linyathelo elinceda ushishino lwenguqu ukuya kusuku apho abakhweli banokusuka kungqameko ukuya esangweni besebenzisa ithokheni enye yokuhamba yebhayometriki efana nobuso, umnwe okanye iskena se-iris. Iinkampani zeenqwelo moya zisemva kakhulu kweli nyathelo. Eyona nto iphambili ngoku kukuqinisekisa ukuba kukho umgaqo okhoyo ukuxhasa umbono wamava ohambo olungenamaphepha. I-ID enye ayizukwenza kuphela iinkqubo ezisebenzayo ngakumbi kubakhweli, kodwa ikwavumela oorhulumente ukuba basebenzise izibonelelo ezixabisekileyo ngokufanelekileyo.
“Asinakubuyela kwindlela izinto ebeziyiyo ngo-2019 kwaye silindele ukuba abathengi bethu baneliseke. Ngaphambi kobhubhane besilungiselela ukuthatha i-self-service ukuya kwinqanaba elilandelayo nge-ID enye. Ingxaki yenza izithembiso zayo ezimbini zokusebenza kakuhle kunye nokonga iindleko zingxamiseke ngakumbi. Kwaye sidinga ngokupheleleyo itekhnoloji efana ne-IATA Travel Pass ukuze siphinde sikwazi ukuzenzela okanye ukubuyisela kwakhona kuya koyiswa kukutshekishwa kwephepha. Iziphumo zeGPS sesinye sobungqina bokuba kufuneka utshintsho,” utshilo uCareen.
Iziphumo ze-GPS zisekelwe kwiimpendulo ze-13,579 ezivela kumazwe angama-186. Uvavanyo lunika ingqiqo kwinto abakhweli abanokuyithanda kumava abo okuhamba ngomoya. Ndwendwela oku ikhonkco ukufikelela kuhlalutyo olupheleleyo.